Qalab cusub oo qajaarka leh, oo leh soodhiyo buuxa oo fitamiino ah ayaa had iyo jeer ka adkaan doona xulashada qasacadda. Nasiib darro, qashinka aan habooneyn, qajaarka cusubi wuxuu bilaabaa inuu si dhaqso ah u kala gooyo. Habka kaliya ee soo baxaya waa in la cuno khudaarta sida ugu dhakhsaha badan marka ay yihiin cusub, ama si aad u hesho hab cusub oo lagu keydiyo.
Dharka ugu sareeya ee khudaarta loogu talagalay qajaarka: sida loo bacrimiyo khudradda
Dhiroonka, sida dhirta kale, waxay u baahan yihiin bacarimiso joogto ah. Dhaqan ahaan, Bacriminta macdanta ama dabiiciga ah ayaa lagu dabaqayaa. Qaarkood waxay jecelyihiin inay iibsadaan dukaamada, kuwa kale - inay sameeyaan adiga. Xaaladda dambe, waxaa suurtagal ah in la doorto sida dhabta ah ee geedi-socodkaagu uu ka maqan yahay muddada horumarinta.
Sifooyinka qajaarka sii kordhaya ee bacaha
Bannaanka u badan ayaa la yaabi doonaa si ay u akhristaan ​​fikradaha noocan oo kale ah ee lagu beerayo qajaarka. Si kastaba ha ahaatee, beerashada qajaarka ee bacaha waa hab cusub oo cusub oo aan ka badbaadin kaliya sariiraha, laakiin sidoo kale helitaanka goosashada quruxda badan oo qaali ah, dhadhan fiican leh. Maqaalkani waxa aad baran doonaa sida loo beeray qajaarka bacaha, iyo amarka tallaabooyinkooda lagu kobcinayo tallaabo.
Sida loo koro qajaarka balakoonkaaga: Tallaabo tallaabo tallaabo ah
Cucumber waa dhaqanka khudradda ee qoyska bocorka. Warshadu waxay soo saartaa midho badan, waana mid sahlan in la koro. Halkii laga iibsan lahaa geedo, isku day inaad ku beerto qajaarka balakoonka leh abuurka. Sida loo kobciyo qajaarka guriga, waxaana lagu falanqeyn doonaa qodobkan. Noocyada qajaarka ee sii kordhaya balakoonka Toobada hodanka ah iyo wanaagsan ee qajaarka waxay ku xiran tahay kala doorashada xulashada noocyada kala duwan ee dalagga.
Sida loo kobciyo qajaarka baaldiyada: waxaynu baranaa dareenka habka aan caadiga ahayn
Cucumber waa khudrad caan ah in bannaanka u koraan beerta. Laakiin dhawaan, hababka cusub ee qajaarka sii kordhaya ayaa helaya caan. Waxay kuu ogolaanayaan inaad ku raaxaysato naftaada sheyga cusub xitaa shuruudaha magaalada, marka aysan jirin wax suurtagal ah in lagu beero gadaashaada. Waxaa ka mid ah hababkan cusub oo loo yaqaan "boomet".
Liiska noocyada aan caadi ahayn ee qajaarka
Dhiroonka - khudradda caadiga ah ee caadiga ah, oo koraya ubax kasta oo beertiisa ah. Laakiin thanks to saynisyahano iyo xoolaha maalin kasta waxaa jira noocyo cusub oo aan caadi ahayn ee qajaarka in la yaabi kara xitaa ugu caansan oo casri ah. Inta badan noocyada noocaan ah waxaa lagu kobcin karaa si madaxbannaan. Inkastoo xaqiiqda ah inay ka imaanayaan kulaylaha, iyada oo abuuraysa xaalado lagama maarmaanka u ah koritaanka dhirta qalaad, waxay u qabsoomaan si aad u fiican oo ah dhul daaqsimeed.
Inta badan bannaanka u fiirsada sida cilladda sida caleenta caleemaha ee yaanyada. Maxay noqon kartaa sababta, ogow maqaalka maanta. Lack ama xad dhaafka ah qoyaanka Mid ka mid ah sababaha caleemaha ee gudaha tamaandhadu waa maqnaan ama xad dhaaf ah qoyaan. Dabaysha, dhirta ayaa uumi saartaa qadar yar oo ah qoyaan si aan u dhicin, halka caleemaha lagu qallajiyey geel.
Tladiant: Cagaarshaha cas ee khafiifka ah
Tladiant (qajaar cas) waxaa si sahlan loo helli karaa dhirta qalaad, inkastoo khudradda tani waxay leedahay qoyska bocorka. Maanta, qajaarada cas ayaa koray dalalka ku yaalla Koonfur Asiya, Yurub iyo Ameerika, laakiin Bariga Fog waa in si sax ah loo tixgeliyaa goobteeda goobta, inkastoo khudraddaas loo isticmaalay dhirta ornamental.
Farsamada yaanyada sii kordhaya sida ku cad habka Maslov
Fikradda habka mucjisada waxaa lagu qoray qoraaga in ka badan 30 sano ka hor. Maslov Igor Mikhailovich wuxuu muujiyay oo xaq ku dhigay hab gebi ahaanba cusub oo aan caadi ahayn oo beerto tamaandhada, kuwaas oo bannaanka u badan oo xiiso leh. Tan iyo markaas, waxay ku tijaabiyeen xaaladaha cimilada ee kala duwan waxayna ku qanacsan yihiin wax ku oolnimada iyo kalsoonida.
Sida loo koro yaanyada cherry ee dhulka u furan
Tamaandho ama yaanyo, sida badanaa ugu wacno iyaga, waxay ka tirsan yihiin qoyska Solanaceae, waxay leeyihiin dhadhanka ugu fiican, sidaas darteed dhexda dhexe ee xagaaga waxay qabtaan mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee miiska jikada. Sharaxaadda yaanyada cherry, kuwaas oo kala duwan yihiin ku haboon yaanyada yaanyada Cherry - tani waa mid ka mid ah noocyo badan oo yaanyo, kuwaas oo miraha yar yihiin iyo dibadda u eg oo jeeriga, sidaas darteed magaca yaanyada.
Maanta, qajaarka yaryar ma keenaan wax la yaab leh, waxay muddo dheer caan ka ahaayeen dadka degan xagaaga sababtoo ah muuqaalkooda muuqaalka ah, cufnaanta iyo cufnaanta. Gherkins qajaar iyo dabeecadahooda qajaarka qoryaha yar yar, sida loogu yeero Faransiiska, halkaasoo ay dadku bilaabeen, ma dhaafaan 9 cm dhererka.
Waa maxay xilliga dhirta dhirta iyo sida loo go'aamiyo
Bannaanka u badan inta badan ma arko farqiga u dhexeeya xilliga dhirta iyo xilliga dhirta. Laakiin way kala duwan yihiin. Ereyga ugu horeeya wuxuu loola jeedaa xilli cayiman oo dhirta dhirta oo dhan ah. Marxaladda labaad waxay ka kooban tahay dhirta noocyo kala duwan ama noocyo kala duwan ah iyo mudada hawlqabadyadooda.
Sida loo koro yaanyada "Crimson Miracle"
Taxanaha "Mirpberry Miracle" ayaa lagu soo bandhigay shaybaarrada hay'adaha NGO-yada muddo 12 sano ah. В результате этого появился будущий любимец всех овощеводов. Если вас тоже интересует томат "Малиновое чудо", в этой статье вы найдете его подробное описание, а также особенности агротехники.Tilmaamaha iyo astaamaha "Mirpberry Miracle" Tamaandhada "Mirpberry Miracle" waa mid aad u jilicsan, oo leh saxarka fareeshka midabka qaraha, macaan iyo casiir leh.
Gharkin qajaarka: noocyada ugu fiican
Dadka intooda badan ma yaqaanaan waxa qallalan yihiin, iyo si qaldan u yeeraan miraha yar yar ee qajaarka caadiga ah. Dhab ahaan, gherkins waa kooxo qajaarka ah, midhaha oo dhererka dhererkoodu yahay 5 cm, laakiin kama badna 8 sm, qajaarka la yiraahdo. Maaddaama qajaarka yar la yiraahdo, waxaan horey u soo aragnay, hadda waxaan ku baran doonaa noocyada ugu caansan ee qanjirada qajaar ee dhul furan iyo koriyo.
Yaanyo waa berri, miro ama qudaar, waxaan fahamsanahay jahwareer.
Tamaacada waa midhaha miraha tamaandhiga ah ee qoyska reer Solanaceae. Warshadu waxay noqon kartaa mid sanadle ah ama qiyaastii ah, waxay sii koreysaa labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta. Tamaandho waa la koray oo lagu koriyo, beerta furan, on balalkies iyo xitaa on windowsill ah. Waxaa jira noocyo farabadan oo yaanyo ah, sida yaanyada waa mid aad u caadi ah waxaana loo isticmaalaa warshadaha, qurxinta iyo warshadaha.
Sida loo koro qajaarka dhalooyinka caaga ah, adoo isticmaalaya qashinka goosashada
Isticmaalka isticmaalka ballaadhan ee karinta, dad badani waxay la yaabaan sida ay u koraan qajaarka on loggias si ay u baabi'iyaan sanadka oo dhan. Sidaa darteed, qodobkan ayaa ka wada hadli doona sida, meesha iyo goorta la sameyn karo. Noocyada suubban ee qajaarka ee sii kordhaya dhalooyinka Sidee fiican u qaboobaa xilliga jiilaalka ama xilliga guga hore si aad u jajabiso jikada leh qajaarka cusub ee koray ... balcony ama loggia.
Sida loo koro yaanyada on windowsill: beerto iyo daryeelidda yaanyada guriga
Ma jirto wax aad u fiican marka loo eego jiilaalka ilaa xagaaga. Samee niyadda xagaaga oo aad u kala bixiso liiska xilliga qaboobaha, waxaad ku kobcin kartaa yaanyada delicious ee windowsill ah. Noocyada caanka ah ee yaanyada ee sii kordhaya ee daaqadaha Xilliyada daaqada marka la dooranayo noocyo kala duwan oo ku haboon koritaanka daaqadaha, laba tilmaam oo muhiim ah ayaa lagu hagaa: • Baaxadda baadiyaha.
Liiska noocyada khashinka
Gourds si fiican u koraan on carradu bacaadka iftiin. Waxay jecel yihiin qorraxda, laakiin waxay si fiican u koraan kambaska culus. Chernozems waxay ku habboon tahay dalagga beeraha, laakiin xaaladahaas waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah. Hadda ogow waxa khuseeya dalagyada qaraha. Kuwani waa: watermelon, qaraha, zucchini, squash iyo bocorka.
Waxa la sameeyo si ay qajaarka aan qadhaadh lahayn
Cucumber waa khudradda ugu caansan adduunka. Waxay ku koraan sanadka oo dhan iyo meel kasta: rukunka iyo hoyga filinka yar-yar, jardiinooyinka iyo xilliyada gu'ga, dhulka hoostiisa. Waxay badanaaba dhacdaa in xataa qajaar qadhaadh qadhaadh ah gudaha gudaha. Aynu soo dhaweyno waxyaabihii qadhaadhka ahaa, waxa la samaynayo, sidaa daraadeed qajaarka qadhaadhka ah ma koraan, iyo waxa la sameeyo.